Miramare - igumbi lokulala elinye elinendawo yokupaka yabucala - I-Airbnb
Miramare - igumbi lokulala elinye elinendawo yokupaka yabucala
Ifakwe embindini kanye kumgama wokuhamba kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kunye neendawo ezinomdla. Kwimizuzu eli-10 yokuhamba umgama ungafumana iindawo zokutyela, indawo yokuthenga, iibha zekofu, icinema yemultiplex, igadi yezityalo, iipaki zedolophu.
Indawo entle yale ndlu iqinisekisa ukuhlala okugqibeleleyo. Ifakwe ecaleni kwesikhululo sikaloliwe esiPhambili, kunye nemizuzu nje eli-10 uhamba ukusuka kwiSikwere esiPhambili. Le ndlu ilungele abantu aba-4 kwaye inegumbi lokuhlala elibanzi elinethafa, igumbi elinye kunye negumbi lokuhlambela. Ikhitshi kunye nendawo yokutyela inxulunyaniswe negumbi lokuhlala liyenza ibe banzi kwaye ikhululeke.
Kwindlu uya kufumana yonke into oyifunayo ukuze uhlale ukhululekile - ine-air-conditioning kwaye iqhagamshelwe kwindawo yokufudumeza ephakathi, ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezixhobo kunye nempahla, kukho umatshini wokuhlamba, i-Wi-Fi ekhawulezayo, kunye ne-cable TV.
Indawo idityaniswe ngokugqwesileyo kuzo zonke iindawo zesixeko ngezithuthi zikawonke-wonke. Izikhululo zebhasi kunye netram zikufuphi nje ekoneni.
Indawo esembindini edolophini iya kukuvumela ukuba ufikelele kuyo yonke into enomtsalane ngeenyawo kwaye wonwabele ubomi bobusuku besixeko ngaphandle kwesidingo sokuxhomekeka kwisithuthi sikawonke-wonke.
Kufuphi kukho 24/7 ivenkile yokutya.
Ukuba uza nemoto kukho igaraji yabucala phambi kwesakhiwo semoto yakho.
4.87 · Izimvo eziyi-97
Le ndlu isembindini wesixeko kwindawo ethe cwaka yezakhiwo zokuhlala, kumanyathelo ambalwa kuphela ukusuka kuzo zonke iindawo ezinomtsalane kubakhenkethi, iindawo ezinomdla kunye neziganeko. Le ndlu ikwindawo ekufutshane neSikhululo sikaLoliwe esiPhambili, igadi yezityalo, iholo yekonsathi yaseVatroslav Lisinski, iivenkile zokutyela, iivenkile, iibhari, iiklabhu zasebusuku, iindawo zokubhaka, iivenkile ezinkulu, iHolo yeSixeko, inkundla kunye neZiko lokuThenga elibalulekileyo.
Ekufikeni kwakho ndiya kukunika izitshixo zakho, iingcebiso kunye neengcebiso.
Emva koko - uya kuba nakho konke ubumfihlo obudingayo, kuba asihlali kwisakhiwo esifanayo. Kodwa ungaqhagamshelana nathi nanini na ukuba ufuna nantoni na.